SomaliaReport: 3 Caruura Miino ay ku Cayaarayeen ku Qaraxday
By UGAAS DEEQ ABDI 02/17/2012
Ugu yaraan saddex caruur ah oo ku noolaa xeryaha dadka barakacayaasha (XDB) ee tuulada Bali-jiir ee gobolka Galgudud ayaa caawa ku nafwaayey maykay miino ay ku cayaarayeen ku qaraxday, sida ay goobjoogayaal u sheegeen Somalia Report.
“caruurtu waxay ku cayaarayeen aalad qaraxda oo ay umaleeyeen wax lagu cayaaro, laakiinse meeshay ku nafbaxeen. Waxaan maqlay qarax kadibna arkay qiiq, waana argagaxay,” Cabdullaahi Xuseen oo ah barakace xerada degan.
Labo caruur ah oo ka badbaaday qaraxa waxaa ku dhacay argagax, ayaa mudane Xuseen ku daray isagoo ka cabanaya qashinka shilku keenay.
“Xerada waxaa ka buuxa qashin ay qaarkiis milatarigu uga tageen, cidna ma nadiifiso,” barakacaha ayaa ku eed sheegtay.
Ma aha markii ugu horeysay oo caruuri ku nafwaayaan aalaadka qarxa oo ku filiqsan dalka oo dhan. Sateembartii sannadkii hore, afar caruur ah ayaa ku dhintay Suuqa Muqdisho iyagoo ku cayaaraya aaladaha qarxa. Labo caruuroo kale ayaa ku nafwaayey gobolka Bakool iyagoo ku cayaaraya miino bishii Juulay.